‎Baar gama on Apple Podcasts
Baar gama is a podcast in Afan Oromo featuring current technological, political and social discussions to bring together Oromo communities around the globe closer and to inspire a culture of giving back. Simply put, Baargama is a platform to entertain, inform and inspire.
Baar gama baar gama
Keessummaa keenya qophii kanaa Leellisaa Baraa (Lelisa Bera) yeroo ta’u dhiheenya kana Yunivarsiitii UC Berkeley irraa Barumsa Psychology (Xiinsammuu) dhaan eebbifameera. Muxannoo isaa barnoota biyya ambaa fi waa'ee qo'annaa xiinsammuu isa gaafanneerra.
Credit: The introduction was taken from ABC7 News
Daldalaan wal barra (Kutaa 2ffaa)
Qophiin kun haasaa Obbo Jootee Waaqjiraa Koorsaa waliin goone kutaa 2ffaa fi isa xumuraati. Obbo Jooteen hundeessaa dhaabbata 'Equinox Outsourcing Services' yeroo ta’u dhaabbatuma kanatti hogganaa Damee Afriikaa Bahaa dha. Baakki hojiif jireenya isaa Keeniyaa Nairobiidha. Haasaa Daldalaan wal barra jedhuun eegalle itti fufna.
Daldalaan wal barra (Kutaa 1ffaa)
Kutaa kana keessatti Obbo Jootee Waaqjiraa Koorsaa dubbisne. Obbo Jooteen waliin hundeessaa Dhaabbata Equinox Outsourced Services jedhaamuu fi Dayrekteera Kutaa Baha Afriikaati. Haasaa obbo Jootee waliin goone keessatti kan xiyyeeffanne daldala irratti. Muurtee dhaabbata ofii dhaabuu dudduuba maaltu jira gaaffii jedhuuf deebii soqneerra. Yaadota tibbanaa biroos kaasnee mari'anneerra.
Dinagdeen kun maali?
Barbaachisummaa beekumsa dinagdee, dinagdee fi uummata Oromoo akkasumas waligaltee gabaa bilisa Afriikaa dhiheenyatti mallatteeffame irraa Itophiyaa fi uummatni Oromoo akkamitti fayyadamu danda'u dhimmoota jedhan irratti Hayyuu Ikonomiksii Dr. Addunyaa Biraanuu Olaanii waliin Baargamni haasaa godhee ture.
Baargamni poodkaastii Afaan Oromoo dhimmoota Dinagdee, Teknooloojii, Hawaasa, Qabeenya Umamaa fi dhimmoota kkf irratti hayyoota Oromoo baargama jiran waliin haasaan bakka itti godhamu fi dhaggeeffatoota Afaan Oromoo addunyaa mara irra jiraniif karaa toora interneetii sagantaa qaqqabu.